Nhau - Musiyano uripo pakati pejuzi nejuzi
Chaizvoizvo juzi rudzi rwejira rakarukwa. Knitwear ipfungwa yakafara. Knitwear inogona kukamurwa kuita yekotoni yakarukwa uye yemvere yakarukwa, uye majuzi ndeemvere dzemakwai. Sweta dzakarukwa dzatinowanzo taura nezvadzo dzinowanzoreva micheka yakarukwa nekuruka michina. Icho chepamusoro igomo uye mvere dzakarukwa majuzi maererano nenzira dzekugadzirisa hadzina kufanana, donje rakarukwa majuzi mukugadzirwa kwekucheka nekusona tekinoroji. Yakarukwa juzi haina. Mucheka wakarukwa kuburikidza neyakagadzirwa disc. Iwo majuzi atinowanzotaura nezvazvo anonyanya kuve zvipfeko zvakarukwa neshinda yemvere, uye juzi dzakarukwa ipfungwa yehunyanzvi yehunyanzvi. Kazhinji, zvipfeko zvemukati, mbatya dzemitambo yekotoni, masokisi, nezvimwe zvinogona kutariswa sekurukwa.
Knitwear inowanzo kuve yakapfuma mukushongedza uye nemuviri maitiro. Mumakore achangopfuura, akakurumbira akarukwa cardigan musanganiswa uye machisa akakodzera kwazvo kune vasikana vadiki. Sarudza rakasimba jira rakarukwa juzi nenguo pfupi uye zviwitsi-zvine mavara leggings naMartin bhutsu. Akapfeka akanaka kwazvo, siketi yemupfeko haifanire kureba. Mumamiriro ekunze anotonhora, zvakare iri sarudzo yakanaka kusarudza yakakora bhutsu bhutsu. Iko kusanganisa kuri kwemafashoni, kutsva, seksikäs uye akanaka.
Iyo yakasununguka uye yakasununguka kunzwa kweakarukwa majuzi, sejasi, inogona kuratidza zvakanakisa iyo yeEuropean neAmerican maitiro. Kana iwe ukapfeka yakatetepa-inokwana pamusoro, inoenderana denim mapfupi anowedzera zvishoma kukurumidza. Masokisi eBrown nejacket rakarukwa riine siketi zvinoita kuti utaridzike seksiketi uye uzere nerunako. Iyo yekuvhara-inokodzera mhedzisiro ye knitwear inogona kuita kuti mazamu ako nehudyu zvioneke zvizere, nepo zvitokisi zvitema zvinongotambanudza uye kudzikira makumbo ako mitsara. Runako rwevakadzi rwakaratidzwa zvakanyanya. Kana iwe ukapfeka jasi rakarukwa, iwe hauna kukodzera zvakanyanya kune inorema yakarukwa snood. Ikozvino kadikidiki kadikidiki kangufu yakasungirirwa pamutsipa, iri mufashoni uye nerupo.